Arduino + Bluetooth, mienzaniso uye mhinduro dzemapurojekiti edu pachedu | Mahara emahara
Arduino + Makaralı
Kutaurirana pakati pemagetsi emabhodhi chinhu chatinoda tese pane imwe nguva yezvirongwa zvedu. Nekudaro, mapurojekiti senge IoT kana Internet yezvinhu zvakamuka kugadzira smart devices. Asi vese zvavo vanoda bhodhi ine waya isina waya senge bluetooth kana waya. Tevere tinokuudza iwe chii chinonzi Arduino + Bluetooth uye ndeapi mikana kana mapurojekiti anogona kuitwa neiyi tekinoroji.
1 Chii chinonzi Bluetooth?
2 Ndeapi mabhodhi eArduino ane Bluetooth?
3 Chii chatingaite neArduino + Bluetooth?
4 Wifi kana Bluetooth yeArduino?
Chii chinonzi Bluetooth?
Zvichida pari zvino munhu wese anoziva tekinoroji tekinoroji, tekinoroji isina waya inotibvumidza kubatanidza zvishandiso pamwechete kutumira data pakati pavo nekukurumidza uye nemazvo hapana kudiwa kwenzvimbo yemusangano kana router. Iyi tekinoroji inowanikwa mune akawanda nhare mbozha, kubva pamahwendefa kuenda kuzvishongedzo zvakaita semahedhifoni kune zvinhu zvakaita semafoni efoni kana desktop desktop
Tekinoroji yeBluetooth pamwe nekubatana kweasina waya kwakakosha muInternet yezvinhu, kwete chete nekuti chikamu chakakosha asi nekuti akasiyana emidziyo neBluetooth inoita kuti network kana data mesh pakati pezvigadzirwa zvinyatso uye hazvitsamire pamapoinzi akawanda e kusangana. kusangana kana dhata node. Kune izvi zvese, bluetooth tekinoroji iripo kwazvo muzvirongwa neArduino, IoT uye kunyangwe mune yazvino Raspberry Pi mamodheru.
Kune mavhezheni mazhinji ebluetooth, yega yega inovandudza pane yapfuura uye ese anopa mhedzisiro imwechete asi nenzira inokurumidza uye ine mashoma simba rekushandisa. Saka, Arduino + Bluetooth inosanganisa zvakanyanya kushandiswa muhunyanzvi hwenyika.
Nekudaro, izvozvi hapana mhando ye Arduino UNO iyo ine bluetooth nekutadza uye kuti chero mushandisi anogona kushandisa tekinoroji nekutadza. Ichi ndicho chinhu chatinofanira kuwana kungave kuburikidza nenhoo kana makadhi ekuwedzera kana kuburikidza nehunyanzvi mamodheru anoenderana neArduino Project.
Munguva pfupi yapfuura kushandiswa kutsva kwakagadzirwa kwemidziyo ine tekinoroji tekinoroji, izvi zvakavakirwa mukushandisa zvishandiso zvebluetooth semabhakoni kana michina yakapusa inoburitsa chiratidzo nguva zhinji. Iyi sisitimu yemabhakoni kana emabhakoni inoita chero chishandiso chakangwara kuunganidza mhando iyi yemasaini uye inobvumira geolocation pamwe nerumwe ruzivo rwunongogona kuwanikwa chete nematekinoroji senge 3G yekubatanidza kana neisina waya yekuwana nzvimbo.
Ndeapi mabhodhi eArduino ane Bluetooth?
Sezvatakambotaura, haazi ese mabhodhi eArduino anoenderana nebluetooth, asi, kwete ese mamodheru ane bluetooth yakavakirwa mubhodhi ravo. Izvi zvinodaro nekuti tekinoroji haina kuberekwa yakasununguka semamwe matekinoroji uye kwete ese mapurojekiti eArduino aida bluetooth, saka zvakagadziriswa regedza iri basa kune nhoo kana mabhodhi ekuwedzera aripo uye anogona kubatana kune chero Arduino bhodhi uye shanda zvakafanana sekunge yaitwa pane mamaboardboard. Kunyangwe izvi, pane mamodheru ane bluetooth.
Iyo inonyanya kufarirwa uye yazvino modhi inonzi Arduino 101. Ndiro inoitika kune yekutanga Arduino bhodhi ine bluetooth, inonzi Arduino Bluetooth. Ku mahwendefa maviri aya tinofanira kuwedzera iyo BQ Zum Core Iyo isiri-yekutanga Arduino bhodhi asi yakavakirwa pane ino projekiti uye yeSpanish mavambo. Aya matatu mabhodhi akavakirwa paArduino Project uye anokwanisa kutaurirana kuburikidza neBluetooth. Asi haisi iyo yega imwe sarudzo sezvatareva. Kune mamwe matatu ekuwedzera mahwendefa Vanowedzera bluetooth basa. Izvi zvinowedzera Iwo anonzi Bluetooth Shield, Sparkfun bluetooth Module uye SeedStudio bluetooth Shield.
Iwo mabhodhi ane Bluetooth mune dhizaini dhizaini, iwo ataurwa pamusoro, michina iri pane Arduino UNO bluetooth module inowedzerwa iyo inotaurirana nevamwe vese bhodhi. Kunze kwekunge Arduino 101, modhi inoshanduka zvakanyanya zvine chekuita nemamwe mabhodhi eArduino nekuti ine 32-bit dhizaini, iine simba kupfuura mamwe mamodheru mukati meArduino Project. Kunyangwe muchokwadi, huwandu hwemahwendefa hwaderedzwa zvakanyanya sezvo imwe modhi isisatengeswe kana kugoverwa uye isu tinogona chete kuzviita kuburikidza neyakagadzirwa nemaoko, sezvazviri neArduino Bluetooth, iyo yatinogona chete kubudirira kuburikidza nezvayo zvinyorwa.
Sarudzo yekuwedzera kana Bluetooth nhovo dzinonakidza nekuti dzinobvumidza kushandisa zvekare. Ndokunge, tinoshandisa bhodhi kune chimwe chirongwa chinoshandisa bluetooth uyezve tinogona kushandisa zvakare bhodhi kune chimwe chirongwa chisina bluetooth kungodzikisa kuwedzerwa. Chikamu chisina kunaka cheiyi nzira ndechekuti iwo ekuwedzera anoita chero chirongwa chinodhura zvakanyanya nekuti zvinoita sekunge iwe wakatenga mabhodhi maviri eArduino kunyangwe mune rimwe chete richashanda.
Chii chatingaite neArduino + Bluetooth?
Kune akawanda mapurojekiti atinogona kushandisa yeArduino bhodhi asi pane mashoma anoda runhare. Sezvo isu parizvino tichigona kuwana chero chinhu chakangwara chine bluetooth, tinogona kutsiva chero chirongwa chinoda kuwanikwa neInternet nebhodhi rine Arduino Bluetooth uye kutumira Internet kupinda neBluetooth. Tinogona zvakare gadzira vakurukuri vakangwara kuvonga kuArduino + Bluetooth mabhodhi kana kugadzira zvikwangwani kuti uwane nzvimbo. Hazvina basa kutaura zvishandiso zvakaita semakiribho, mbeva, mahedhifoni, maikorofoni, nezvimwe ... zvinogona kuvakwa uchishandisa ino seti yemagetsi, kubvira parizvino chero sisitimu yekushandisa inoshanda nemazvo nehunyanzvi hwebluetooth.
Mune akakurumbira marekodhi senge Mirayiridzo tinogona kuwana mapurojekiti asingaverengeke anoshandisa bluetooth uye Arduino uye mamwe mapurojekiti asingashandisi Arduino + Bluetooth asi anogona kushanda nawo pamwe nezvakakodzera shanduko.
Wifi kana Bluetooth yeArduino?
Wifi kana bluetooth? Mubvunzo wakanaka unozvibvunzwa nevakawanda, nekuti kumapurojekiti mazhinji zvinoitwa neiyo Wi-Fi kubatana, kubatana kweBluetooth kunogona kuitawo. Pakati pese, isu tichafanirwa kutaura nezve mabhenefiti uye zvisina kunaka mapoinzi eese matekinoroji, asi mune ino kesi, mumapurojekiti ane Arduino, isu tinofanirwa kutarisa chinhu chakakosha. kushandiswa kwesimba. Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kutarisa kune simba ratinaro uye kubva ipapo sarudza kana tichishandisa Wi-Fi kana Bluetooth. Uye zvakare, iwe unofanirwa kuona kana isu tichigona kuwana iyo Internet kana yekuwana poindi, nekuti pasina izvozvo, iyo isina waya yekubatanidza haina kunaka kune zvakawanda. Chinhu chisingaitike neBluetooth, iyo isingade iyo Internet, chete mudziyo wekubatanidza nayo. Kupiwa Zvinhu zviviri izvi zvinofanirwa kusarudza kana chirongwa chedu chichatakura Arduino + Wifi kana Arduino + Bluetooth.
Ini pachangu, ndinofunga kuti chero sarudzo yakanaka kana tiine simba rakanaka rekushandisa uye neInternet kuwana, asi kana tisina, ini pachangu ndinosarudza Arduino + Bluetooth, iyo isingade tekinoroji yakawanda uye izvo zvazvazvino magadzirirwo simba uye zvinonyanya kushanda kushandisa. Uye newe Ndeipi tekinoroji yekushandisa yako mapurojekiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Arduino + Makaralı